बालुवाटारमा गुपचुप निर्णय, अध्यादेश जारी ,मन्त्री बने चकित ! - Purbi sanchar
बालुवाटारमा गुपचुप निर्णय, अध्यादेश जारी ,मन्त्री बने चकित !
२०७७ मंसिर ३०, मंगलवार १९:२१
काठमाडौ / मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे । तर, गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरेर मंगलबार साँझ ५ बजेकै लागि तय भएको जानकारी गराइयो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीले सबै मन्त्रीहरु गइसकेपछि मुख्य सचिवलाई अध्यादेश बारेको निर्णयको माइन्यूट बनाउन लगाएर ओलीले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेका थिए । बालुवाटारले सिफारिस गरेसँगै हतारमा शीतलनिवासले पनि अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको हो ।